समाजको उन्मुक्ताः आधुनिकता कि बिकृति? « Artha Path
समाजको उन्मुक्ताः आधुनिकता कि बिकृति?
जीवन र जगत सम्बन्धी सत्य तथा सामाजिक चेतनाको रूप वा सामाजिक उपयोगितामा आधारित मूल्यको खोज नै दर्शन हो । पूर्वीय दर्शनले आत्मिक सुख, आशिर्वचन, अरूको भलो गर, आत्मानुशासन, आफैभित्र संसार खोज्ने अभ्यास गर्नु र न्याय र समानता जस्ता आधारभूत पक्षलाई समेटेका छ ।
लिच्छविकालमा केन्द्रदेखि ग्रामसम्मको प्रशासनिक व्यवस्था गरेको र हिन्दु तथा बौद्ध धर्म तथा दर्शनमा आधारित सांस्कृतिक एवम् सामाजिक संरचना, लिच्छवि लिपि र संस्कृत भाषा, धार्मिक सहिष्णुताको साथै विभिन्न प्रथा, चाडपर्व जस्ता प्रमुख सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताका आधारमा नै नेपाली समाज र सस्कृतिको विकास हुँदै आएको हो । नेपाली संस्कृति लोकजीवनमा पनि आधारित छ । त्यसैले साहित्य, संगीत, कला लोकसंस्कृतिको मूल स्रोतको रुपमा नेपाली संस्कृतिलाई लिइन्छ ।
लिभिङ टुगेदर यानकी सँगै बस्ने यो प्रथा पनि पश्चिमी संस्कृतिको उपजको रुपमा नेपालको शहरी क्षेत्रमा भित्रिइ सकेको छ । अहिले शहरिया युवायुवती शहरमा सँगै एउटै कोठामा बस्ने गरेको पाइन्छ । यसरी विवाह नगरीकन सँगै बस्ने सस्कार हाम्रो होइन । यसरी बस्दा गैरकानूनी रुपमा बच्चा जन्मने र ती बच्चाहरु कि त मृत्यूको शिकार हुने कित उनीहरुको आमा बाबुको पहिचानमा कानुनी समस्या आउने गरेको छ । यो कार्य कानुनी आधारमा दण्डनीय पनिछ ।
नेपाली जनजातिका मौलिक सांस्कृति र परम्परा यस मुलुकका सांस्कृतिक सम्पदा हुन् । वैदिक सनातनका मूल्य मान्यता र परम्परा नेपालमा मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्दै आएका छन् । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक जातजाति समुदायमा कुनै न कुनै रूपमा पूर्वीय दर्शनको प्रभाव छ । नेपाली सस्कार र संस्कृति हिन्दु धर्म सोही दर्शनका आधारमा प्रचलनमा रही आएको छ ।
समाजमा विकासको नाममा हुने गरेको विकृतिले विनासको आमन्त्रण गरिरहेको छ भन्न सजिलै सकिन्छ । सयौ वर्ष पहिलेको नेपाली समाज र अहिलेको नेपाली समाजलाई हेर्दा यो बाटोतर्फ समाज जाँदैछ कि भनेर अनुमान गर्न कठिन छैैन । विज्ञान र प्रविधि प्रयोगले समाजलाई त्यसतर्फ धकेल्न सहज बनाएको छ । परिवर्तनकारी समाजको दृष्टान्तलाई हेर्दा परिवर्तनको गन्तव्य सहिछ वा गलत भनेर छुटयाउन हम्मे नै परेकोछ । यो कुरालाई हाम्रो समाजमा नै घटित केही दृष्टान्तले पुष्टि गदर्छ ।
एकजना मित्र जो आफूलाई अमेरिकी संस्कारमा २० वर्षसम्म बसेर नेपाल फर्केर आएको बताउछन् । पश्चिमी समाज र संस्कृतिलाई राम्रोसँग बुझेको मेरो मित्र त्यही संस्कृति नै नेपालको समृद्धिको लागि आवश्यक बताउँछन् ।
तर एक दिन मित्रसँगको छोटो बसाईको क्रममा उसले साटेको अनुभवले मेरो आङ नै सिरीङ्ग हुन्छ । नेपाली चेलीहरु पतिको सतित्वमा बस्नु धर्म हुने कुरामा संस्कारकै रुपमा लिने गरेका छन् । मित्रको श्रीमती पनि नेपाली नै भएकोले त्यो संस्कार भन्दा फरक संस्कारमा पक्कै हुर्केको होइन होला । तर दुई साथीबिचको सल्लाह बमोजिम श्रीमती साट्े रम्ने योजना बुनेर यो कार्य गरेको अनुभव मसँग निसंकोचका साथ सुनाउँछन् ।
अर्को दृष्टान्तको रुपमा एक जना मित्रको श्रीमतिसँग स्वास्थ्यको कारणले गर्दा सम्बन्ध राम्रो छैैन । श्रीमती उनको स्वास्थ्यको कारण श्रीमानको यौन प्यास मेटाउन असक्षम छ । यहि कमजोरीको फाइदा उठाउँदै उसले श्रीमतीलाई बाध्य बनाएर केटी साथी राख्न पाउने अनुमति लिन्छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र घरमा नै सबै छोरा छोरीको अगाडि केटीसाथी राख्ने गरेको कुरा सुनाउँछ । तिनको श्रीमती अनि छोराछोरी सबैले बाबाको खुशीको लागि उनको केटेीसाथीलाई स्वीकारेको अवस्था रहेछ । श्रीमानको खुशीको लागि श्रीमतीले मुटु माथि ंढुगा राखेर यो बाध्यताको माखे साङ्लोमा बाँधिन बाध्य रहेछन् ।
समाजमा यो र यस्ता दृष्टान्त कैयौँ छन् । तर हाम्रो बन्द समाज भित्र गुम्सिएका यस्ता घट््नाहरु प्रसस्त छन् भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ । के हाम्रो समाजले पनि यो सस्कारलाई सही हो भनेर मान्ने हो भने हाम्रो समाजको समुन्नति होला त ? म त यो तर्कसँग सहमत छैन । हाम्रो विकासको बाधक हाम्रा धार्मिक संस्कार होइन । हामीमा विकास हुँदै गरेको कुसंस्कार नै हो भनि दावा गर्दछु । त्यसको अतिरिक्त आधुनिकताको नाममा फेरि पनि समाजमा महिला नै प्रताडित हुनुपर्ने हो भने हामीलाई त्यो सस्कार स्वीकार्य छैन ।
लिभिङ टुगेदर यानकी सँगै बस्ने यो प्रथा पनि पश्चिमी संस्कृतिको उपजको रुपमा नेपालको शहरी क्षेत्रमा भित्रिइ सकेको छ । अहिले शहरिया युवायुवती शहरमा सँगै एउटै कोठामा बस्ने गरेको पाइन्छ । यसरी विवाह नगरीकन सँगै बस्ने सस्कार हाम्रो होइन । यसरी बस्दा गैरकानूनी रुपमा बच्चा जन्मने र ती बच्चाहरु कि त मृत्यूको शिकार हुने कित उनीहरुको आमा बाबुको पहिचानमा कानुनी समस्या आउने गरेको छ । यो कार्य कानुनी आधारमा दण्डनीय पनिछ । तर शहरी जीवनशैलीले यो विकृतिलाई अपनत्व लिन थालेकोले यो थप जटिल बनेर आएकोछ । नेपाली सस्कार र कानुनले समेत नमान्ने यो संस्कारकै कारण गर्दा शहरीया जीवन थप जटिल बन्दै आएको छ । आगामी दिनमा यो प्रथा भयाभहको रुपमा नै आउने निश्चित प्रायः छ ।
नेपाली समाजको राम्रो पक्ष भनेको आत्मीयता र अपनत्व लिने संस्कार पनि हो तर आज यो सस्कार धारासायी हुँदै गएकोछ । आफ्ना तथा पराई कोही नभई सबैमा आफ्नै परिवारभित्रको सदस्यझैँ माया, सम्मान र आदार गर्ने संस्कारी स्वाभाव नेपाली समाजको हो । यो संस्कारमा पनि बादल लाग्न थालेको छ । एकांकी समाजको रुपमा नेपाली समाजको विकास र विस्तार हुँदै जान थालेको छ । बाबा आमाले कमाएको सम्पत्ति हड्प्ने र पछि उनीहरुलाई बुढेसकालमा घरबाट निकाल्ने गरेको धेरै उदाहरण पाइन्छ । उनीहरुलाई पाल्नै परे बृद्धाश्रममा लगेर राख्ने चलन नेपालमा पनि सुरु भइसकेको छ । बद्धाअवस्थामा बढी स्याहार सुसार गर्नुपर्ने समयमा घरबाटै बाहिरीनु पर्ने नेपाली संस्कार होइन । यो पश्चिमी सस्कारको सिकाइको रुपमा नेपाली समाजमा भित्रिइसकेकोछ । आज धेरै जेष्ठ नागरिकहरु सडकका पेटी र बृद्धाश्रममा देख्न सकिन्छ । आफ्ना बाबा आमा प्रतिको दायित्व समेत निर्भाह नगर्ने संस्कार विकास र बिस्तार हुँदैछ । यसलाई पनि नेपाली समाजमा स्खलित संस्कृतिको रुपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसैगरी आत्मीयता र अनुभवको साटासाट गर्ने हाम्रा सस्कार नेपाली समाजको अर्को गहना हो । नचिनैकै जो कोही भएपनि एकआपसमा चिनजान गर्ने र अनुभवको साटासाट गर्ने हाम्रो सस्कार विश्वले नै नमुना मान्ने गर्दथ्ये । मानौँ एउटा छोटो दूरीको बसको यात्रा गर्दा पनि सँगै सीटमा बसेका सँग चिनजान गर्ने र अनुभवको साटासाट गर्ने र छोटो समयको चिनाइलाई दिगो बनाई राख्ने जस्ता आत्मीयता प्रदर्शन गर्ने संस्कार नेपालीमा थियो । यसवाट आत्मीयता बढ्नुको साथै एकअर्काले जानेको ज्ञानको प्रसार छिटै हुने गर्दथ्यो तर आज नेपालीहरुको हरेक घरका सदस्यहरु बिच पनि बोलचाल कम हुन थालेको छ अनुभव साट्ने कुरा त हुँदै हुँदैन । मोबाइल लगायतको उपकारणलाई पश्चिमी समाजको विकास मान्ने हो भने यसले हाम्रो आत्मीयता साट्ने संस्कारलाई क्षयीकरण गर्दैछ ।